Google Docs ရှင်းလင်းချက် | Martech Zone
Google Docs ရှင်းလင်းချက်
Google Docs သည်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီအတွက်တကယ်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီငယ်ရွယ်သောကုမ္ပဏီ ၅ ခု (ကျွန်ုပ်တို့၏ပဉ္စမအချက်ကိုငှားရမ်းခဲ့သည်)၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆာဗာသို့မဟုတ်မျှဝေထားသောကွန်ယက်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုမလိုအပ်ဘူး။
ငါစလုပ်တုန်းကစာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကိုအီးမေးလ်နဲ့ဖြတ်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ငါပစ်တယ် Google Docs နှင့်စာရွက်စာတမ်းများချွေတာ ... ထို့နောက်ကျွန်တော် ပြောင်းရွှေ့ သို့ Google Apps ကပ နှင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျှဝေစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးထိန်းသိမ်းရန်။ Dallas၊ San Jose နှင့် India တို့တွင်အလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့ ၀ င်များရှိသည် Basecamp နှင့်ဤစာရွက်စာတမ်းများနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာကြောင့်စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်!
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဂူးဂဲလ်စာရွက်စာတမ်းသည်ကော်ပီရေးသူများနှင့်အယ်ဒီတာများအတွက်သုံးစွဲသူများအတွက်အကြောင်းအရာကိုတည်ဆောက်ရာတွင်အသုံးဝင်မည့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ နှစ်ခုလုံးသည်တချိန်တည်းတွင် login လုပ်နိုင်သောကြောင့်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ chat ပြုလုပ်ခြင်းစသည်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသော tool တစ်ခုဖြစ်သည်။
Common Craft သည်ဂူဂဲလ်မှတ်တမ်းများနှင့်ပတ်သက်သောအခြားဗီဒီယိုတစ်ခုကိုမျှဝေခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိသည်
သင် sign up မလုပ်ပါက၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ အနည်းငယ်သော ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများသာဗဟိုတွင်မပါ ၀ င်သောအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Basecamp သည်စီမံချက်၏တိုးတက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ ဆက်သွယ်၍ သိမ်းယူသည့်အခြေခံကျသောစီမံကိန်းသိုလှောင်ရုံဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်မှတ်တမ်းများသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများစွာရှိပြီးစိတ်ကူးပြောင်းလဲမှုသမိုင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Basecamp အစား၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။
နှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လိုနေတုန်းပါပဲ ပေါင်းစည်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက ငါ့ကိုအကဲဖြတ်ထားပါတယ် Atlassian Jira။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့စနစ်တစ်ခုနဲ့တူတယ်။ ငါလိုက်နာမယ်။ ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမင်းသိအောင်ပြောပြမယ်။
Tags: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စာရင်းစစ်စစ်ဆေးမှုများစာရင်းMarTech ဘလော့ရေဒီယိုပြအော်ဂဲနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကလစ်နှိပ်နှုန်းပေးဆောင်ppcppc စျေးကွက်ရှာဖွေရေးslider ကိုလူမှုမီဒီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဗီဒီယိုမိုဘိုင်း
ဇန်နဝါရီလ9ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ7နာရီ 26 မိနစ်
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်၊ Doug ဟိုနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဒီဇိုင်းဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ သူသည် မိုင် ၁၅၀ အကွာတွင် စာရေးဆရာတစ်ဦးနှင့် အလုပ်လုပ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ Denver နှင့်ဝေးသောလူများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်။ သူတို့ ဘယ်လို လုပ်ကြသလဲ။ Google Docs နှင့် Google Apps များ။ REM ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် အဓိပ္ပါယ်ဖော်နိုင်စေရန်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏အဆုံးဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် ကောင်းမွန်သည်ဟု ခံစားရပါသည်။
ဇန်နဝါရီလ 10 ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ 10 နာရီ 19 မိနစ်
ကျွန်တော် လုံးဝသဘောတူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ အလတ်စားနဲ့ အကြီးစားကုမ္ပဏီတွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် MS Office ကို "မရှိမဖြစ်" အပလီကေးရှင်းဟု အမြဲယူဆထားသော်လည်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးက Google Docs နှင့် အခမဲ့ Office ကြည့်ရှုသူများ (ဥပမာ Excel Viewer) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Office မပါဘဲ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း စည်းရုံးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အကြောင်းပြချက်မှာ စာရွက်စာတမ်းများကို ဖတ်ရန်အတွက် ကြည့်ရှုသူများ (နှစ်ချက်ကလစ်ဖြင့် ကြည့်ရလွယ်ကူသည်) ကို အသုံးပြုသော်လည်း စာရွက်စာတမ်းအသစ်များ ဖန်တီးရန်အတွက် Google Docs ကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Exel အသုံးပြုသူကြီးတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် သံသယဖြစ်မိသော်လည်း ကွန်ပျူတာအသစ် (Vista၊ ရယ်စရာ!) ကိုဝယ်ပြီး စမ်းသုံးကြည့်မည်ဟု တွေးခဲ့သည်။ အဲဒါက နည်းနည်းတော့ လေ့ကျင့်ယူရတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ပြဿနာမရှိဘဲ တစ်လလောက် "ရှင်သန်" နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် သူပြောတာမှန်တယ်လို့ ကျွန်မ ယုံတယ်။
အလွန်ကောင်းမွန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာ စာရွက်စာတမ်းများကို အမှန်တကယ်မျှဝေရန် မည်မျှကြာကြာ မည်မျှကြာကြာ မျှဝေရမည်ကို သိရှိနားလည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အခုအချိန်မှာ လူတွေက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် အီးမေးလ်ကနေတစ်ဆင့် Excel spreadsheet တွေ ပို့တဲ့အခါ တကယ်ကို စိတ်ပျက်မိတဲ့ အနေအထားရောက်နေပါပြီ။ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းက ဘာလဲဆိုတာ သင်ဘယ်တော့မှ မသိနိုင်လို့ အရမ်းအကျိုးမရှိပါဘူး။ Sharepoint ဆာဗာသည် ထိုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်ဟု စောဒကတက်နိုင်သော်လည်း သင့် Sharepoint ဆာဗာသို့ မချိတ်ဆက်နိုင်သော အဝေးထိန်း/အဆက်ဖြတ်ထားသော သုံးစွဲသူများရှိနေသောအခါတွင် ထိုသို့ဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။
ဤပြောင်းလဲခြင်းသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကော်ပိုရိတ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သုံးစွဲသူများအတွက် အလွန်ခက်ခဲသော်လည်း ဝဘ်အခြေခံအက်ပ်များကို အသုံးပြုနေသည့် ကော်ပိုရိတ်အသုံးပြုသူများ ပိုများလာနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နေရဆဲဖြစ်သည်။
မင်းဘာသာပြန်ဆိုထားသလိုပဲ "အဲဒါက ငါတို့သိတဲ့အတိုင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရဲ့အဆုံးပဲ၊ ငါ.." 🙂
ဇန်နဝါရီ 14, 2008 မှာ 4: 24 AM
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရွယ်အစားတူ ကုမ္ပဏီငယ်တစ်ခုကို လည်ပတ်ပြီး Zoho ၏ကမ်းလှမ်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတော်လေးလိုက်ဖက်ပါသည်။ http://writer.zoho.com MSWORD အင်္ဂါရပ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ရန်။
စတီဗင် Anderson က
ဇန်နဝါရီ 17, 2008 မှာ 4: 04 AM
Google Docs ကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Basecamp ကို မကြိုက်ပါဘူး။ ကြိုက်ပါတယ်။ ရှုံ့ချသည်. ကိရိယာများသည် သင်အလိုရှိသလောက် လူများစွာနှင့် ပူးပေါင်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် အခမဲ့အကောင့်များကို ရရှိမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ကိရိယာများသည် အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။
23:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 55 တွင်
SMB များသည် google အက်ပ်များကို မည်သို့အသုံးပြုပုံနှင့် ကွာဟချက်များရှိသည်ကို သုတေသနလုပ်နေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ JIRA ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် သင့်အတွေ့အကြုံအကြောင်း ရေးပါ။